Ulicwangcisa njani ikhadi lokuhlawula ngokusisiseko kwiApple Pay | IPhone iindaba
Ukuseta ikhadi lokuhlawula ngokusisiseko kwiApple Pay
Ukuba ukhona usebenzisa iApple Pay kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad Njengenkqubo yokuhlawula, usenokuba sele uqaphele ukuba ungagcina amakhadi amaninzi kwizinto ezikhoyo; American Express, MasterCard kunye neVisa.
Okwangoku eSpain sinayo kuphela amathuba ambalwa okuzisebenzisa, Njalo kwii -apps, kuyakufuneka silinde ukuthengwa kwe-Intanethi kunye nokwenyama de i-Apple isebenze emhlabeni, okusinceda thina, kuba iimpazamo ezifunyenwe kwimakethi yaseNyakatho Melika azizukuphindwa apha kwakhona, okanye ndiyathemba.
Inyani yile yokuba ngeendlela ezininzi kunye nendlela yokuhlawula ngokuthe ngqo nangokulula kuya kufuneka sitsho kwinkqubo leliphi ikhadi elidityanisiweyo elingagqibekanga ezona ntlawulo ziqhelekileyo, ngelixa ezinye ziya kuhlala zenzelwe iintlawulo ezithile ozikhetha ngqo ngaphambi kokuba uhlawule.
Njengoko sisazi ukwaziswa kwamakhadi kwiPasbook kulula kakhulu, kufuneka nje senze i «mfa nekiso»Ukuze le nkqubo icace gca nangokuthembekileyo ukubalwa kwamakhadi kunye nomhla wokuphelelwa. Umyalelo wokungena kwamakhadi awuthethi kwanto, ke ukuseka elinye njengokwendalo kuya kufuneka siye:
Qalisa usetyenziso lwe Useto.
Toque en Incwadi yokundwendwela kunye neApple Pay.
Yiya kwicandelo Iinkcukacha zentengiselwanos kwaye ucofe ku Ikhadi elingagqibekanga.
Khetha ikhadi ufuna ukusebenzisa okungagqibekanga.
Ngoku uya kuhlala unalo eli khadi lentlawulo, ngaphandle kokuba ngesandla khetha enye, iluncedo lokwenene kuthi kuthi banamakhadi kuphela okusetyenziswa lusapho kwaye hayi amakhadi adibeneyo okanye amakhaladi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Pay » Ukuseta ikhadi lokuhlawula ngokusisiseko kwiApple Pay
Akunakwenzeka ukubeka iPayPal?
ungabeka ezinye izikrini? Andifumani nantoni na kwincwadi yokupasa okanye u-Apple ahlawule kwimenyu yokuseta, nokuba ngu-6 okanye u-6 ngokudibanisa kuhlobo 8.1
Sibabini, akukho nto ibekiweyo malunga nepasbook okanye i-Apple pay ... iya kuba ye-iOS9 okanye njalo =). Kwaye ukuba sivula i-passbook app, andizukukuxelela ... yile encinci.
Yile nto bendizakuyithetha, okanye awukazichazi kakuhle, okanye asikakuqondi. Kodwa ndicinga ukuba kuya kufuneka uqale ubeke indlela esinokuthi sibeke ngayo ikhadi letyala kwincwadi yokundlula inyathelo nenyathelo, ukuze kamva siy-odole. Konke okugqibelele!
Ewe, balibele ukubeka eyona nto ibaluleke kakhulu ukuze abantu bangaphambani, I-APPLE IHLAWULE KUPHELA KWI-PASSBOOK UKUBA IPHONE YAKHO YENZISWE NJENGOMMANDLA WASEUNITED STATES, yinto ekufuneka uyenzile ukukopa / uncamathisela .. .
Umcimbi wokuba iApple Pay ifumaneka kuphela xa uneakhawunti yaseMelika esele siyigubungele kwesinye isithuba.
Ukuba ufuna ukucinga malunga nokukopa-uncamathisela ngaphaya, ndicinga ukuba abantu bayasifunda kwaye balandele amakhonkco esiwafaka eposini.
Enkosi uTrako, ukuba kunjalo ... kuya kufuneka ujonge ngaphambi kokubhala.
Ngokunyaniseka ndikufundile, kodwa wena nabanye abaninzi, kwaye ndiyazi malunga "ne-USA kuphela." Kodwa uwuphatha umxholo ngendalo kangangokuba ukhokelele ekucingeni ukuba kunokwenzeka apha. Andiqwalaseli mpendulo yakho ichanekile, kuya kufuneka uthathe iimpazamo ezenziweyo kwaye ngubani omele agqithise ngokucacileyo ngumkhuphi, ngakumbi ukuba ufuna ukuqhubeka nokufunda.
Icebo lokuhlengahlengisa ukukhanya kwe-iPhone kwiqhosha lasekhaya
Irediyo FM iSpain ngoku iyahambelana ne-iPhone 6 kunye ne-iPhone 6 Plus